Ny Consulat frantsay any New York dia manolotra divay Val de Loire: Partie Une
Home » Lahatsoratra farany farany » Divay & Fanahy » Ny Consulat frantsay any New York dia manolotra divay Val de Loire: Partie Une
culinary • Kolontsaina • Vaovao farany Brezila • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Divay & Fanahy
Alahady tolakandro tsara tarehy tao Manhattan. Nijoro tamim-paharetana aho nijoro teo amin’ny filaharana lava teo ivelan’ny Consulat frantsay teo amin’ny Fifth Avenue ary talanjona tamin’ny habetsahan’ny olona liana tamin’ny fianarana momba ny divay tao amin’ny Lohasahan’i Loire ny alahady tolakandro tany New York.
Na dia nanontany olona vitsivitsy nijoro teo akaikiko aza aho momba ny safidin'izy ireo amin'ity faran'ny herinandro tonga lafatra ity, dia tsy nahomby tanteraka aho tamin'ny fianarana ny antony manosika azy ireo. Angamba izany no fahafahana nihaona tamin'ny sommelier malaza Pascaline Lepeltier izay nahazo mari-pankasitrahana noho ny fahaizany divay sy sakafo; angamba tao amin'ny Consulat frantsay tsara tarehy no nanaovana ny hetsika, na koa tia mankafy fotsiny ny mpanatrika. divay frantsay iray vera amin'ny faran'ny herinandro. Na inona na inona fandrisihana, mahafinaritra ny hetsika, ny divay dia nihazakazaka avy amin'ny mahaliana ho mahafinaritra ary raha averina ny fandaharana dia ho isan'ny voalohany RSVP aho.
Ankehitriny. Momba ny divay
(Mamirapiratra voajanahary). 100 Chenin Blanc
Nanomboka ny Le Rocher des Violette i Xavier Weisskopf tamin'ny 2005. Nianatra momba ny famokarana divay tao Chablis sy Beune izy ary nahazo mari-pahaizana momba ny viticulture sy oenology. Ny asany voalohany dia niaraka tamin'i Louis Barruol tao Gigondas, mpamokatra ny Chateau de Saint Cosme, izay nahatonga azy ho Chef du Cave, nanao vintages efatra nandritra ny fotoana niarahany tamin'ny Chateau.
Ny fitiavany an'i Chenin Blanc dia nitondra azy tany amin'ny sehatry ny Saint Martine le Beau ao Montlouis (manatrika an'i Vouvray manerana an'i Loire), ilay faritra heverina ho iray amin'ireo fiantsoana divay fotsy roa lehibe an'i Touraine. Tamin'izany fotoana izany, tsy dia nankasitrahana ity toerana manan-tantara ity ary i Weisskopf dia afaka nahazo voaloboka masina 22.5 hektara, anisan'izany ny ampahany 10 hektara amin'ny Chenin matotra amin'ny tanimanga sy silex amin'ny tany sokay, miampy trano fitehirizam-bato manta tamin'ny taonjato faha-15, tany am-boalohany. fitrandrahana harena an-kibon'ny tany nohadiana lalina tao amin'ny banky sokay ao amin'ny Loire ao Amboise (nambolena talohan'ny WW11 ny ankamaroany). Ny asa nanirahana azy: manao divay mazava sy mifantoka. Ny voalobony rehetra dia voamarina organika, mamela ireo voaloboka tranainy sarobidy ireo haneho ny maha-izy azy. Ny filozofia nentim-paharazana dia miitatra hatrany amin'ny efitra ambanin'ny tany izay ahitana ny fampiasana barika tranainy mampiseho ny fikatsahany ny traikefa Chenin marina.
Tetehina ny voaloboka mba hahazoana vokatra kely 30-35 hekôlita isaky ny hektara (ny voaloboka taloha dia manome 25 hs/ha eo ho eo) ary ny fijinjana dia atao amin'ny tanana. Ny barika hazo dia nofantenana mihoatra ny vy ho takalon'ny oksizenina atolotry ny hazo izay mitahiry tsara ny voankazo tsy mamela ny hazo oaka hiditra ao.
Ny Originel Petillant (Pet-Nap; miboiboika voajanahary) dia atao amin'ny alàlan'ny fomba razambe izay ametrahana ny divay alohan'ny hahavitan'ny fermentation voalohany tsy misy leviora faharoa na siramamy. Ity fomba tranainy ity dia mamokatra divay mamiratra tsotra kokoa sy rustic izay manjavozavo mahazatra, tsy voasivana ary mety ho voasarona ary tsy voasivana.
Ny dingana Petillant Originel dia anarana manokana noforonin'ny Montlouis sur Loire vignerons tamin'ny taona 2007. Mba hahazoana ny fanendrena ny divay dia tsy maintsy atao TSY asiana lalivay ary TSY misy liqueur de tirage (fatran'ny siramamy ampiana amin'izany fotoana izany. amin'ny famenoana tavoahangy mba hanamafisana ny fermentation mitohy) na liquer d'expedition (siramamy ampiana amin'ny fotoanan'ny disgorgement). TSY MAINTSY natao tamin'ny voaloboka tany am-boalohany sy ny siramamy ao aminy ary ny taonan'ny teratany ny divay.
Ny 2017 Le Rocher des Violette Petillant tany am-boalohany dia voamarina organika miaraka amin'ny Chenin Blanc 100% nambolena tamin'ny vatosokay tanimanga avy amin'ny voaloboka 40+ taona. Ny ampahatelon'ny divay dia amboarina ao anaty siny hazo tranainy, 2/3 ao anaty siny vy tsy misy pentina. Atao anaty tavoahangy miaraka amin'ny leviora teratany, fatra aotra.
Ny lokony mavo mavo miaraka amin'ny loko maitso maitso dia asongadin'ny bubbles malefaka mba hampifaliana ny maso; Ny orona dia mahita melon, paoma mavo, citrus maivana, ahitra voasarimakirana, ary ginger. Ny lanilany dia mahita felam-boninkazo sy brioche, ampitomboina amin'ny soso-tantely. Maina miaraka amin'ny asidra avo, ity traikefa matsiro ity dia mifanandrify tsara amin'ny salmon, akoho amam-borona, fromazy malefaka sy malefaka.